ZOMA 18 JANOARY 2019
NIVERINA INDRAY NY DELESTAZY : Mitaraina ny mpanjifa etsy 67 ha
Niverina indray ny delestazy eto an-drenivohitra tato ho ato. Mitaraina araka izany ny mponina ao amin’ny fokontany 67 ha Avaratra Atsinanana sy ny manodidina. Tsy mifidy fotoana fa na andro na alina io dia ahitana izay fahatapahan’ny herinaratra izay eny amin’ny faritra 67 ha. 12 février 2018
« Tapatapaka matetika ny herinaratra eto aminay ary manimba zavatra. Milaza anefa ny tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa Jirama fa tsy misy ny delestazy. Raha izay no izy inona ary ny fiantsoana an’ireny fahatapahan’ny jiro matetika aty aminay ireny ? Tsy vitsy ny fitaovana simba vokatr’izay fahatapahan’ny herinaratra matetika izay nefa tsy hiantohan’ny orinasa Jirama », hoy ny mponina.
« Na ovaina im-polo na injato ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama sy ny Minisitry ny angovo dia tsy ho voavaha ny olana ao amin’izany orinasa izany . Ny tena marina, izao fitondrana izao mihitsy no tsy mahavita azy », hoy ny fanazavana nomen’ny renim-pianakaviana iray etsy 67 ha.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (255) 14 janvier 2019 Tovolahy nafatotra dia notopasana rano mangotraka HABIBIANA TANY MAROANTSETRA (163) 13 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (86) 17 janvier 2019 Mihanaka ny valanaretina kitrotro, olona roa no efa maty FARITRA ALAOTRA - MANGORO (46) 13 janvier 2019 Mihanaka ny kitrotro, olona roa no efa maty FARITRA ALAOTRA-MANGORO (36) 13 janvier 2019 Feno 18 taona ny Fan’s Club an’ny M3TV sy M3 FM FANARAHANA ONJAM-PEO SY FAHITALAVITRA (29) 13 janvier 2019